Apple patents akawanda-anobata skrini iyo yatisingade kubata | IPhone nhau
Ndinoziva zvinonzwika kushamisa, asi zvine musoro. Pasi pezita re "Kuona uye kudhirowa kwakawanda-kubata uye nepedyo sensor«, Apple inotsanangudza nzira mune iyo photodiode kana imwe Hardware inonzwisisa kuswedera pedyo ivo vaizoshanda pamwe chete neyechinyakare yakawanda-inobata skrini kuti vagadzirise nzvimbo yekudyidzana kwevashandisi neiyo skrini. Mune zvimwe zviitiko, izvo zvinotsanangurwa zvakafanana neiyo 3D Kubata, asi ingangoshanda munzira yakatarisana.
Lo masisitimu aripo izvo hazvidi kusangana kuti zvishande vanoshandisa makamera uye mamwe masystem akasarudzika. Muenzaniso weichi chiitiko tekinoroji inobata kufamba mu3D kwakagadzirwa nePrimSense, kambani yakawanikwa neApple muna2013 uye yakashanda pachizvarwa chekutanga cheKinect iyo Microsoft yakashandisa pane yayo Xbox. Zano raApple ndere kupa imwezve kumonyoroka kumasystem atovepo pamusika.
Iyo skrini inotsanangurwa mune iyi patent inosanganisira chikamu che capacitive sensors yakapararira paLCD skrini ine yakawanda inopindirana nepedyo sensors, iyo yaizopa yakazara yakazara hybridi 'pikicha' nekuratidzira padyo nechidzitiro pasina kuibata. Iyi ndiyo mhinduro yakagadzirirwa kushandiswa pane iPhone, MacBook, kana zvimwe zvigadzirwa zvinotakurika.
Gwaro rinotsanangura kuti iyo system Ini ndaizoshandisa infrared uye photodiode, chimwe chinhu chakafanana neiyo proximity sensor iyo iyo iPhone inoshandisa kuona patinoiunza iyo nzeve. Chiedza chinogadzirwa nemaLED chaizobvisa pachigunwe uye kutorwa nemaphotoodhi, ayo anochinja chiito chinoitwa zvichienderana nechiedza chakagamuchirwa. Asi iyi sisitimu yaisangoona chete zvigunwe, asi yaigona zvakare kuona chanza cheruoko pamusoro pechiso chechiso. Zvichienderana nezviyero zvema sensors, ndinogona kutofungidzira ndichitenderedza mapeji emabhuku achirovera mudenga.
Iyo patent inotsanangurawo kududzirwa kwesangano rinounganidzwa nehurongwa, izvo zvinobvumidza kumanikidza mabhatani chaiwo, daidza zviito pasina kubata iyo skrini kana kumisikidza zvikamu zvehadhiya yedhizaini, pakati pezvimwe zvinhu. Kune rimwe divi, nekushandisa sisitimu iyi, Apple inogona kubvisa iyo yazvino proximity sensor, iyo inoonekwa padyo nemukurukuri, kunyanya pane chena iPhone. Zvine musoro, iyi patent yaisazobvisa gomba muFaceTime kamera.
Kune rimwe divi, mukana wekushandisa tekinoroji iyi patent mu keyboard kana trackpad, yechipiri yesarudzo iri nyore kunzwisisa kana isu tichifunga nezvekuti ivo vatove nekubata pamusoro yakafanana nechero ipi yeIOS chishandiso. Muzviitiko zvese izvi, chinangwa chinenge chiri chekuvandudza ruzivo nezviratidzo zvitsva, zvichibvumira, mune iyo keyboard, kuti ivandudze kunyora (Uye sei?).
Sezvatinogara tichitaura, kuti patent yakaiswa hazvireve kuti ichaitwa, asi zvinotibatsira kuti tizive nekambani iri kushanda. Kana izvo zvinotsanangurwa papatent iyi zvikaverengerwa mu iPhone, pamwe tinogona kushandisa chishandiso nemagirovhosi pasina matambudziko, asi kazhinji tichaona mushandisi interface ine zvimwe zvingasarudzwa. Iwe unofungei nezve zano?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Apple patents akawanda-anobata skrini iyo yatisingade kubata
Iyo tekinoroji yanga isina iyo Samsung Galaxy? Paunounza munwe wako padhuze usingabate sikirini mumufananidzo kana mumenyu yakaratidzwa kare
Mhoro Diego. Hongu, zvinotsanangurwa muchinyorwa. Musiyano ndeweumwe neumwe unoshandisa uye kuti izvo zvakatsanangurwa apa zvakanyatsojeka.
Izvo zvinoshandawo kuita basa reKubhatani reKumba (ndokuti, ita chiratidzo kuti ubve kumenu yekutanga usati wabata mutambo kana chero chishandiso chatiri kushandisa uye kana uchiita basa raunoda) wobva waisa sensor yeminwe chidzitiro zvakare.
Pakurova bhatani repamba, sensor yekumberi yekamera inotakurwa, iyo iPhone iri yekunyanyisa uye iyo skrini iri hombe ine saizi imwe chete yeselula.
Remangwana richasvika ipapo uye kana Apple isingaiti, Samsung ichaita